admin – MM Republic
နောက်တစ်ဆင့် ကလင်…ကလင်…ကလင်…ကလင်’ အလုပ်တက်ဘဲလ်သံနဲ့အတူ လုပ်ငန်းခွင်သို့ အပြေးလေးလှမ်း ဝင်ခဲ့ပြီး တနေ့တာအလုပ်ခွင်ကိုစတင်လိုက်ပါသည်။ အော်မေ့နေလို့ ကျနော့်နာမည်နဲ့ မိတ်လိုက် အဲလေ မိတ်ဆက်ပေးရဦးမှာပဲ ကျနော်နာမည်က ‘မိုးမခ’ ခင်မင်သူအများစုကတော့ ကိုမိုးပဲခေါ်ကြတာပေါ့ သချာင်္နဲ့ကျောင်းပြီးထားပြီး ရေသန့်စက် ရုံလေးတခုမှာ လခစား ဝန်ထမ်းလေးတဦးပေါ့ဗျာ……… ဒီအလုပ်မှာကျနော်လုပ်တာ၅နှစ်လောက်တော့ရှိပြီ ဒါပေမဲ့ စွန်တော့မစွန်သေးဘူး (ကြွားတာ)… ဒီနေ့တော့အလုပ်သမားလိုအပ်ချက်အရ အင်တာဗျူးခေါ်ထားလို့စက်ရုံအပြင်မှာပွဲတော်ကြီးဖြစ် နေပြီလေ မန်နေဂျာကဗျူး ကိုယ်ကဘူးပေါ့ ဟဟ အဲပြောရင်းနဲ့ ချာတိတ်လေးတဘွေ ရုံးခန်း ထဲဝင်လာပြီး မန်နေဂျာကြီးကစမေးနေပါပြီ……… ’သမီးနာမည်က’……’သန္တာ ပါဆရာ’……’သမီးအသက်က ၁ရနှစ်ပဲရှိသေးတာပဲ……ကျောင်းဆက်မတက်ပဲဘာလို့အလုပ်လာလုပ်တာလဲ’ ……’သမီးက အဖွားနဲ့နေရတာပါ ဆရာ…အလုပ်မလုပ်ရင်အဆင်မပြေတော့လို့ အိမ်နားကအဒေါ် တယောက်ကဒီမှာအလုပ်ခေါ်နေတယ် သူပြောပေးမယ်ဆိုလို့ လာခဲ့တာပါ ဆရာ’………အေးပါကွယ် ဒီမှာကမိသားစုစက်ရုံ သဘောမျိုုးလုပ်နေကြတာပါ သမီးလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဦးတို့ဘက်ကပြန်ဆက်သွယ်ပေးပါ့မယ်နော်……ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ……အေးအေးပြန်လို့ရပြီသမီး ညနေ သမီးအိမ်နားကအဒေါ်နဲ့ အကြောင်းပြန်ပေးလိုက်မယ်နော်…… […]
အပေါ်ကမနေချင်သူ နင်ကလဲ မောနေပြီလား၊ လုပ်ပါအုံးဟ၊ ငါဒီမှာကောင်းတုန်း” လုပ်နေရင်း တန်းလမ်း သူ့ကိုယ်ပေါ်ပိကျလာသော ကိုရဲနောင်ကို လှမ်းဖက်ရင်း ခင်မာရီကပြောလိုက်သည်။ ခု နောက်ပိုင်း ခင်မာရီ နှင့် သူ ဒီကိစ္စ အပေးအယူ တည့်နေသည်။ သူ့ မိန်းမနှင့် လားလားမှ မတူ။ ခင်မာရီက ဒီကိစ္စ စိတ်ပါသည်။ သူနှင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှိသည်။ ဒါကို ကိုရဲနောင်ကလဲ ကြိုက်သည်။ သူ့ မိန်းမဆီက မရသည့် အရာကို ခင်မာရီဆီမှ အပြည့်အဝ ရနေသည်။ “မောတယ်ဟ၊ ငါဒီမှာ မနားတမ်းလုပ်နေတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ၊ သေရောပေါ့၊ ခန နားအုံးမယ်ဟာ၊ နင်မစောင့်နိုင်ရင် ငါ့ အပေါ်က တက်လုပ်” ကိုရဲနောင်က ပြန်ပြောသည့် လေသံကိုက မောသံပေါက်နေသည်။ မမောခံနိုင်ရိုးလား၊ […]
မမကြီးတွေအသဲစွဲ ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှဆင်းပြီး အိမ်ခြံဝန်းထဲကို လွုပ်လီလွုပ်လဲ့လျှောက်ဝင်သွားသော ဒေါ်နီနီမြင့်၏အိုးကြီးကို ကြည့်၍ ထူးကျော်စိတ်ထဲက ကောင်းကောင်းကြီး ပြစ်မှားနေမိသည်။ ဒေါ်နီနီမြင့်သည် သူဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆွဲလာသည့် သက်တမ်းတစ်လျှောက် စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည့် အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူမ အသက်အားဖြင့် ၄၅ နှစ်ဝန်းကျင်ခန့် ရှိပြီ။ ထူးကျော်ထက် အသက် ထက်ဝက်နီးပါးလောက် ကွာသည်။ အဒေါ်အရွယ် အန်တီကြီးအရွယ်သာဖြစ်သည်။ ထူးကျော်က အသက်သုံးဆယ်ပင် မပြည့်သေးပါ။ ဒေါ်နီနီမြင့်က လင်မရှိသည့် မုဆိုးမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သမီးနှစ်ယောက်အမေလည်းဖြစ်သည်။ သမီးတွေက အိမ်ထောင်ရက်သား ကျကုန်ကြပြီး အဝေးမှာ သွားရောက်၍ မိသားစုအလိုက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ သူမအနားမှာ ဘယ်သူမှမရှိပါ။ အချိန်မရွေး ဆွဲစားလို့ရသည်ဆိုတာ သေချာပါသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမားများစွာအထဲကမှ ထူးကျော်ဆိုင်ကယ်ကိုသာ အမြဲတစေ ရွေးစီးတတ်သည့် သူမကို ထူးကျော်ကိုယ်တိုင်ပင် သတိထားမိလာခြင်းကြောင့်ပဲ […]
မနိုင်စိန်လေးများ ဆရာ့အမည်မှာ ဦးစိုးဝင်းဖြစ်သည်။ ဆရာက အသက်အတော်ရမှ အိမ်ထောင်ကျသည်။ အိမ်ထောင်ကျရသည့် အကြောင်းကလည်း တော်တော်ရယ်စရာ ကောင်းသလို ဖြစ်နေသည်။ ဆရာက အလွန်ရိုး အလွန်အေးသည့်လူ ဖြစ်သည်။ တနေ့၌ သူ၏ ကျောင်းသို့ ကျောင်းဆရာမတစ်ဦးပြောင်းလာသည်။ ဆရာမမှာလည်း အပျိုကြီးဖြစ်သည်။ ဆရာမ၏ အမည်မှ မြမြလှိုင်ဖြစ်သည်။ သူမကတော့ မြမြဟုသာ ခေါ်စေသည်။ ဆရာကလည်း လူပျိုကြီး ဆရာမကလည်း အပျိုကြီးဖြစ်သမို့ အားလုံးက ဆုံတိုင်း ဝိုင်းလော်ကြသည်။ အလော်ကောင်း၍လားမသိ။ နောက်ဆုံးတော့ ထိုဆရာလူပျိုကြီးနဲ့ ဆရာမအပျိုကြီးတို့ ညားသွားကြလေသည်။ ညားကြပြီးသည့်နောက် ကျောင်းနဲ့နီးသည့် ကျောင်းမှ ပေးထားသော တန်းရားတွင် မနေတော့ဘဲ အိမ်ကြီးတစ်လုံးကို ငှါးနေကြသည်။ ညရောက်တိုင်း ဦးစိုးက မြမြကို ဘွတ်သည်။ သို့သော်လည်း မြမြမှာ ဘာခံစားမွုမှ မရှိဘဲ […]
ဆယ်တန်းကျောင်းသူ နေက ဆယ်တန်းကျောင်းသူလေးပါ(အဆောင်နေကျောင်းအိပ်ကျောင်းစားပါ ယောကျ်ားလေးတွေနဲ့သပ်သပ်ဆီဆိုတော့ မကမ္ဘာထဲမှာပဲနေခဲ့ရသူပါ။) ဆယ်တန်းကျောင်းသူဆိုတော့ ဆယ်တန်းဖြေရတာပေါ့လေ(သိပြီးသားမလား) နေဆယ်တန်းဖြေ တော့ နေနဲ့တစ်ခုံတည်းထိုင်ရတယ့်ကောင်လေးက နေတို့ ကျောင်းက နာမည်ကျော်လေးလေ(ဆိုးလို့တော့ ဟုတ်ဘူး ပွဲအားလုံးမှာ သူက ခေါင်းဆောင်ပြီး လိုက်လုပ်ပေးလို့)(သူကလဲ အဆောင်ကျောင်းသားပဲလေ) နာမည်သာကြီးတာပါ စာမေးပွဲလာဖြေ တော့ နာရီမပါဘူး (နာမည်ကြီးထမင်းငတ်တစ်ကယ်ရှိမှန်းသိသွားတယ်) မြန်မာစာနေ့ကြီး နာရီတစ်လုံး နှစ်ယောက်ကြည့်လိုက်ရတယ်။ အဲ့ကိုယ်တော်ချောက နောက်တစ်ရက် လည်းကျ ရော ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဘာကြောင်းလာပြောတယ်။ နေ့ကို ရောချင်တယ်ပဲ ထင်တာပေါ့ သူက နွေရာသီ အကြောင်း စာစီစာကုံး ဘယ်နှမျက်နှာ ရေးလဲတယ့် နေ က ၆မျက်နှာလို့ပြန်ဖြေ လိုက်တယ် နောက်မှနေ လန့်သွားတယ် ဘယ်နှယ့်လုပ်သိနေရလဲလို့ ဒီလိုနှယ့် နေ့ကို နေ့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကို တစ်ဝက်ပြော တစ်ဝက်မေးလုပ်လာခဲ့တယ့် ကောင်လေးကို နေလည်းခင်မိလာတာပေါ့ […]
ဆာလောင်နေပီ ကျနော်နာမည်က ကိုကိုကြီး…..အသက် ၄၀ အိမ်ထောင်ကျဘူးတယ်…..အိမ်ထောင်ကွဲသွားတာ….သားသမီး ၃ ယောက်ရှိတယ်….. လက်ရှိလုံခြုံရေးကင်းတစ်ခုရဲ ခေါင်းဆောင်ပေါ့ကျနော်နေတဲ့မြို့လေးကသိပ်မကြီးတော့….ကင်းစခန်းတခုလုံးမှာလူ ၂၀ လောက်ဘဲရှိတယ်လေ……..တစ်နေ့တော့ ကျနော်တို့ကင်းစခန်းကို နောက်ထပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အိမ်ထောင်သည်မိသားစု တစ်ခုပြောင်းလာတယ်………..အဲမှာကျနော်ဘဝရဲ့ပထမဝေဒနာစတော့တာပေါ့…… ပြောင်းလာတဲ့မိသားစုကိုနေအိမ်လိုင်းခန်းချပေးဖို့အခက်အခဲဖြစ်တာနဲ့…ကျနော်ယူထားတဲ့ ၂ ခန်းတွဲကို တစ်ခန်းခွဲပေးလိုက်တယ်…….နယ်ကင်းစခန်းဆိုတော့လိုင်းခန်းလဲပေါပေါများများမရှိဘူးလေ…………. ကျနော်ယူထားတဲ့ ၂ ခန်းတွဲကလဲ…ကင်းစခန်းဘေးကပ်လျှက်….ကျနော်ရုံးကိစ္စလုပ်ဖို့နဲ့အနားယူဖိုယူထားတာပါ.. ကျနော်က မြို့ထဲမှာအိမ်ရှိတယ်…… ကင်းစခန်းထဲမှာက နေ့ဘက်လောက်ပဲနေတာများတယ်လေ……………. အသစ်ပြောင်းလာတဲ့မိသားစုကိုတစ်ခြမ်းခွဲပေးပြီး… ကျနော်ကတစ်ခြမ်းနေလိုက်တယ်………………………..။ ကျမနာမည်ကဖြူစင်ပါ…..အားလုံးကမဖြူလို့ဘဲခေါ်ကြတယ်လေ……….ကျမအမျိုးသားက လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း မြန်မာပြည်အနံ့ပြောင်းရွေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့သူပေါ့….ကျမတို့မှာသားသမီး ၂ ယောက်ရှိပီး…သမီးအကြီးက သူအဖိုးအဖွားတွေနဲ့ရန်ကုန်မှာနေတယ်….သားအငယ် ကတော့ကျမတို့နဲ့အမြဲလိုက်နေတယ်လေ….သူကအခုမ (၅)တန်း ကျမတို့ဒီမြို့လေးကိုပြောင်းလာတော့….ကိုကြီး(ဦးကိုကိုကြီး)က လိုင်းခန်းမရှိလို့သူယူထားတဲ့အခန်းကိုတစ်ခန်းခွဲပေးတယ် ကျမတိုကမိသားစု ၃ ယောက်ထဲဆိုတော့…အဆင်ပြေတယ်လေ…သူကလဲအိမ်ထောင်မရှိတဲ့သူ….ညဘက်မြို့ထဲကအိမ်မှာ အိပ်တာဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်လေ….. ကျမအကြောင်းပြောရရင်…ကျမတို့လင်မယားက…သားလေးမွေးပီးကတည်းက နောက်သားသမီးမရအောင်…..လိင်ဆက်ဆံတိုင်း ကွန်ဒုံးသုံးရင်သုံး….မဟုတ်ရင်အပြင်ကိုထုတ်ပစ်တဲ့အကျင့်လေးလုပ်ထားတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့…ကျမက..တားဆေးတွေနဲ့မတည်လို့….နောက်ပီး ပစ္စည်းထည့်ရမှာလဲကြောက်လို့….အဲလိုနေလာတာ…. သားလေးတစ်သက်လို့ပြောလို့ရတယ်……….။ ကျမတို့ဒီကိုပြောင်းလာပီး…ကိုကြီး(ဦးကိုကိုကြီး)ကအစစအရာရာ ကူညီတယ်…ကျမအမျိုးသားကိုလဲနေရာပေးတယ်…… ပြောရရင်တော့…သူကကိုယ့်ကျေးဇူးရှင်လို့ပြောရမလိုပေါ့နော်…..လိုင်းခန်းတစ်ခုထဲမှာအတူနေတာဆိုတော့ကျန်တဲ့သူတွေထက် ကျမတို့ကပိုရင်းနှီးတယ်ပြောရမှာပေါ့…….. ဖြူလေးတို့မိသားစုရောက်လာပီး…..ကျနော်အရင်လိုမပျင်းတော့ဘူးပြောရမှာဘဲ….ဖြူလေးနဲ့နေ့ဘက်တွေမှာအတူနေရတာ သူလုပ်ပေးတဲ့ လဘက်ရည်သောက်လိုက်….အသုပ်လေးတွေစားလိုက်နဲ့…တော်တော်ရင်းနှီးလာတယ်…သူကလဲကိုကြီး…ကိုကြီးနဲ့ သူယောကျာၤးကလဲကျနော်နေရာပေးထားတော့…ပိုဂရုစိုက်တာလဲပါမှာပေါ့…….ဖြူလေးက […]